Doorashada Xubnaha aqalka hoose ee Galmudug oo mar kale saaka ka socota Cadaado Magacyada Musharaxiinta! | kowtharmedia.com
Home WARAR Doorashada Xubnaha aqalka hoose ee Galmudug oo mar kale saaka ka socota Cadaado Magacyada Musharaxiinta!
Doorashada Xubnaha aqalka hoose ee Galmudug oo mar kale saaka ka socota Cadaado Magacyada Musharaxiinta!
Waxaa goor dhow ka bilabaatay magalada Cadaado doorashada qeyb kale oo ka mid ah xubnaha aqalka hoose ku metelaya beelaha maamulka Galmudug waxaana saakay 4ta kuraas u kala tartamaaya Murasade iyo Tumaal.
Maamulka Galmudug ayaa noqday maamulka ugu cadaalada sareeya kadib markii qabiilada Dagan Galmudg laga wada qayb galiyay saami uqaysiga Kuraasta habka qabiiliga ah.
dhanka kale Maamulada qaar ay ka tageen qabiilo Dagan Hiirshabeele sida Beeshs Ilaawaay CIsmaan oo Dagan Suuqa xoolaha Ilaa dhulka Caramadowga kuwaas oo laga korbooday kuraastooda waxa kale oo Jira Qabiila badan oo lagu tuntay kuraastooda sidoo kale waxa Jira kuwaoo si xad gudub ah kuraas loo siiyay sida Faarax Cabdi qaadir oo qabiil kiiska in kayar 100 shaqsi ay ka dagan yihiin Hiishabeele.
Dowlada Soomaaliya ayaa doooneyso in ay Dalka Nabad kusoo dabaasho laakiin dulmiigaas gudaha kajira sidey u helayaan Dowlad cadaalad iyo Nabad?
waxayna taas badalkeeda qaateen Dowlad xad gudubtay iyo Dowlad Musuq maasuq oo la wada ogyahay.
Guddiga doorashada Galmudug ayaa sheegay in maanta loo tartamayo illaa afar kursi oo ka tirsan xubnaha aqalka hoose oo ay ku tartamayaan illaa sagaal musharax oo 8 ka mid ah ay haween yihiin.
Saddex ka mid ah afarta kursi ee saaka loo tartamayo ayaa waxaa ku loolami doona haween kaliya, iyadoo kursiga soo harayna ay ku hardami doonaan xildhibaan hore iyo labo haween ah.
Hoos ka akhriso magacyada musharaxiinta ku loolameysa afarta kursi iyo qaabka ay isugu aadan yihiin.
Previous PostGuddomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir oo shaqada looga joojiyay si kumeel gaar ah (Akhriso)!! Next PostColaadihii Ka Qarxay Cuntooyinka Caadiga ah ee Aduun waynaha laga diiwaan galiyay Daawo muuqaal!!